बित्थामा एकदिन तरंगित राजनीति :: भानुभक्त :: Setopati
बित्थामा एकदिन तरंगित राजनीति
माओवादी र एमालेका कारण देशको राजनीति २४ घन्टा तरंगित भयो।
हिजो दुई बजे गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनाव सार्ने प्रपञ्च गरेको भन्दै सरकार छाड्ने निर्णयबाट पछि हटेको बताए।
केही घन्टा पहिलेमात्रै माओवादीले सरकार छाड्ने समाचार अनलाइनमा देखेर गृह मन्त्रालय पुगेका पत्रकार त्यो बेला छक्क परे जब गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरुमै आफूहरुले सरकार नछोड्ने जानकारी गराए। ‘निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च भैरहेको छ। निर्वाचन नै सार्ने कुरा आएपछि हामीले सरकार नछाड्ने निर्णय गर्यौँ,’ शर्माले भने।
शर्माले कसरी चुनाव सर्दैछ भन्ने खुलाएनन्। तर माओवादी नेताहरुले निर्वाचन आयोगबाट आफूले त्यस्तो सूचना पाएको दाबी गरे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले केही समयपछि निर्वाचन सार्ने कुनै सम्भावना नरहेको र आफूहरुले त्यस्तो सूचना कसैलाई नदिएको प्रष्टिकरण दिए।
तर यादवको प्रष्टिकरणपछि पनि माओवादी र एमालेलेका नेताहरुले चुनाव सार्न लागिएको संशय व्यक्त गरिरहे।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखे– कुनै बहानामा चुनाव सार्ने र अन्तत: अनिश्चित कालसम्म चुनाव नगर्ने षडयन्त्रको चर्चा सुनिदैछ।त्यस्तो कार्य बन्द नगरे सशक्त प्रतिकार गरिनेछ।
सरकार छोड्नै लागेका थियौं, चुनाव सार्ने प्रपञ्च थाहा पाएपछि बस्यौं: गृहमन्त्री शर्मा
गृहमन्त्रीको ८ मिनेटको पत्रकार सम्मेलन
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चमा परेको एक रिटलाई संकेत गर्दै ट्वीट गरे– मतपत्र एउटै कि अलग अलग जस्ता प्राविधिक प्रश्न तेर्स्याएर निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने काम भयो भने संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर आघात पुग्नेछ।
माओवादी नेताहरुले सार्वजनिक रूपमै चुनाव सार्ने ‘षडयन्त्र’ भइरहेको बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीहरूलाई मंगलबार साँझ जिम्मेवारीविहीन बनाइदिए। त्यसले राजनीतिलाई झन् तरंगित पार्‍यो।
त्यो तरंगपछाडिको कारण थियो–मतपत्रसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले बुधबार सुनाउन लागेकाे निर्णय। म‌ंगलबार सर्वोच्चले राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको मुद्दामा बुधबार फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो।
नेता शुक्लाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाई यही असोज २२ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र अलगअलग दुई वटा बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त निवेदनमाथि यही असोज २४ गते सुनुवाइ भएर कारण देखाउ आदेश जारी गरी मंगलबारका लागि छलफलमा बोलाइएको थियो।
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ सकेको थियो। त्यसअघि कसैले चासो नदेखाएको यो मुद्दा रातारात चर्चित बन्यो।
बुधबार दिउँसो सर्वोच्चले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय सुनायो।
सर्वोच्चको फैसलापछि हामीले श्रेष्ठ र ज्ञवालीलाई तपाईंहरु बित्थामा तरंगित हुनुभएछ है ? भनेर सोध्यौं।
माओवादी नेता श्रेष्ठ सर्वोच्चको आदेशबाट निर्वाचन नहुने संशय आधारभूत रूपमा हटेको बताए।
‘तर हामीले हिजो नबोलेको भए त अर्को योजना बनिसकेको थियो,’ श्रेष्ठले भने।
त्यसो भए अब तपाईँहरु सरकारमा बसिराख्नु परेन होइन? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले हाँस्दै भने,‘हामीलाई यस्तो सजिलो किन बनाइदिन पथ्र्याे? हामी अझै हेर्छौँ। सबै गतिविधि हेर्छौँ। औपचारिक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ।’
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि चुनाव सार्न धेरै पक्ष प्रयत्नशील भइरहेकाले आफूहरूले सचेत गराउनु परेको बताए। ‘आजको सर्वोच्चको फैसला राम्रो छ, तर यस्ता प्रयत्न अझै जारी छन्,’ ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने।
कांग्रेस नेताहरुले भने चुनावको समय भएकाले माओवादी र एमालेले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न तथ्यहीन आरोप लगाएको बताए।
प्रकाशशरण महतले एमाले र माओवादी हल्ला फैलाएर हिँडेको बताए। ‘कांग्रेसलाई बेकारको आरोप लगाउँछन्।
उनीहरुले हामीलाई चुनाव भाँड्न प्रपञ्च गरेको भनेर आरोप लगाइरहेको बेला हामी त निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्दै थियौँ। निर्वाचन भाँड्न कसरी सक्छौँ,’ प्रकाश शरणले भने।
कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले मंगलबार एमाले र माओवादी केन्द्रले तथ्यबिना बोलेको बताए।
‘एमाले र माओवादीले कांग्रेसविरुद्ध मनोवाज्ञानिक युद्ध छेडिरहेका छन्। चुनावअघि नै हाम्रै बहुमत आउने हो भन्दै गठबन्धनका नेताहरु बोलिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘हिजो उहाँहरुले जे बोल्नुभयो त्यो पनि तथ्यहिन थियो। कांग्रेसलाई हतोत्साही बनाउन खोज्ने प्रयास थियो।’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कात्तिक २, २०७४, ०७:४९:१०